फेरी एक्कासी रातारात सरकारले लियो यस्तो निर्णय? |
फेरी एक्कासी रातारात सरकारले लियो यस्तो निर्णय?
August 22, 2021 adminLeaveaComment on फेरी एक्कासी रातारात सरकारले लियो यस्तो निर्णय?
कडा लकडाउन गर्ने निर्णय, औषधि बाहेक अन्य सबै पसल बन्द
धरान।अन्ततःधरान उपमहानगरपालिकाले भदौ ४ गतेदेखि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ ।आज (मंगलबार) धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले भदौ ४ गतेदेखि १३ गतेसम्म कडा लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो ।आज बसेको कार्यपालिका बैठकले भदौ ४ गतेदेखि १३ गतेसम्म कडा लकडाउन गर्ने निर्णय गर्दै डीसीसीएमसीलाई सिफारिस गरेको मेयर तिलक राईले जानकारी दिए ।लकडाउन अवधिमा औषधि पसल मात्र खोल्न पाइनेछ।पुरा भिडियो हेर्न तलको फोटो मा क्लिक गर्नुहोला
यो पनि:नेपालमा सरकारी कर्मचारीले सबैभन्दा बढि घुस खाने जिल्ला कुन होला ? हेर्नुहोस्।नेपालमा सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचार हुने जिल्ला कुन होला? हरेक जिल्लाका नागरीकलाई आफ्नै जिल्ला जस्तो लाग्छ । अझ पछिल्लो महामारीको कारण सरकारी निकायमा सेवाग्राहीहरु कमै जानाले कर्मचारीहरु सुस्त भएका छन् ।नेपालमा एक पटक यस्तो सर्वेक्षण भने भएको थियो । उक्त २०७५ सालमा गरिएको सर्भेक्षण पछि केन्द्रले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपनि भ्रष्टाचारमा कमी आएको अन्य कुनै सर्भेक्षण भएको वा प्रतिवेदन आएको भने छैन।
उक्त समयमा अन्य जिल्लाको तुलनामा सिरहामा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको केन्द्रले दावी गरेको थियो । उक्त बर्ष सतर्कता केन्द्रले सिरहा, बाग्लुङ, अर्घाखाँची, ओखलढुंगा चितवन र बैतडीलाई नमुना छनोट गरी सर्वेक्षण गरेको थियो । जसमा सिरहामा सबैभन्दा धेरै ६१ प्रतिशत सेवाग्राहीले सरकारी सेवा लिँदा घुस दिनुपरेको बताएका थिए । यस्तै अर्घाखाँचीमा १२ , ओखलढुंगामा ८ र बाग्लुङमा ५ प्रतिशत सेवाग्राहीले सरकारी कर्मचारीलाई घुस दिएर मात्रै काम गरेको बताएका थिए । ***अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठूलो झटका,यस्ता षड्यन्त्रहरु बाहिरिए।